Ingane ichitha isikhathi esiningi esikhungweni sezikole. Ukuya esikoleni kuwumsebenzi wansuku zonke kubo bonke abafundi. Futhi njalo ekuseni omama bazama ukulungisa izinwele "ezingenangqondo" zamadodakazi abo ngemva kokulala. Phela, ukugqoka kwekhanda esikoleni ngezinwele ezimfushane noma imicu ende kufanele kube mnandi, enhle futhi ewusizo.
Izidingo zekhanda lekhanda
Isikole senza izidingo ezinkulu mayelana nokuvela kwabafundi. Amanye amantombazane azama ukuphuma ngaphandle ngosizo lokubukeka, kodwa noma kunjalo, kusukela esikhathini esidlule, umbono ovamile wabantwana besikole wawunzima futhi unembile.
Izidingo zesikole azithinti ubude bezinwele. Kubalulekile ukuthi lezinwele zihlanzekile futhi zikhululekile, futhi-ke, zihle. Izinwele akufanele ziphazamise ingane ngesikhathi senqubo yokuqeqesha, ngakho-ke ukugqoka esikoleni ngezinwele ezimfushane, ubude obuphakathi noma i-curls ende kufanele kube mnandi.
Imfuneko ebalulekile ukuhlanzeka kwezinwele nokuthobeka kwezinwele. Akufanele ukuheha ukunakwa ngokweqile kwabanye.
Kuvunyelwe ukusebenzisa izesekeli ezifana ne-barrette, i- bezel, i-band elastic and bow. Bheka izicabha ezingalungile kahle, zihlotshiswe kahle nezesekeli.
Ngokuqapha, kufanelekile ukukhetha i-gom, ngoba inguqulo ekhanyayo noma enamandla yomkhiqizo iyovela ngaphandle kwesizinda sokubukeka kwesikole samantombazane.
Izinketho zezinwele zokukhanya ezikhanyayo
Lena yi- hairstyle ephelele yesikole. Ngezinwele ezimfushane, lolu khetho lufanelekile, njenge-spikelet ukusuka ohlangothini:
Izinwele ebunzini lihlukaniswe zibe izintambo ezintathu ezifanayo, ezimbili zazo ezinamathele ezinhlangothini ngosizo lwezingxube zenjoloba.
Okokuqala, ama-spikelets ajikelezayo avela ekhoneni, aphakathi nendawo.
I-pigtail eholelekile ifakwe ngemuva kwekhanda, futhi kusukela emaceleni amabili ahlukanisiwe, izinsimbi ezifanayo ziboshwe kuze kube isikhathi eside izinwele zivumela.
Ama-braids axhunyiwe ngemuva kwekhanda emsila.
Kunezinto zangempela futhi ezilula ekudaleni izinwele zezinwele ezimfushane. Esikoleni, intsha noma umlingisi wokuqala angenza okulandelayo, ngokudalwa okudingayo ibhande elincane nomucu:
Ekupheleni kwendophi, kuyadingeka ukunamathisela isiqeshana sephepha ukuze kube lula.
Hlanganisa izintambo ezincane zezinwele ebunzini bese ubopha ngentambo njengoba kunzima ngangokunokwenzeka ezimpandeni. Silungisa intambo ngendwangu.
Intambo isuke idlula ngezinwele zezinwele ngayinye futhi ifakwe ngefindo.
Ngokulahlekelwa kwezinwele ngokulandelana, udinga ukuthatha ukukhiya okuncane kuze kufike "i-visor" endlebeni.
Ekugcineni, intambo igxilile, futhi izinwele ezivulekile zidibene ngokuphelele.
Inguqulo elula futhi esheshayo yekhanda lezinwele ezimfushane. Esikoleni, intombazane ingenza imisila emibili ngebhande le-raber elifihliwe:
Izinwele zihlukaniswe izingxenye ezimbili ezifanayo ngokusiza ukuhlukanisa okubushelelezi.
Ehlangothini ngalunye kushiywe izinwele ezincane ezizofihla i-gomamu.
Sifaka imisila ngezingqimba ezinwebekayo bese siwagoqa ngezinsimbi ezixhunyiwe.
Ukuze uvikele amafolda, ungasebenzisa okungabonakali noma iziqu.
Kungcono ukhethe okusebenzayo futhi, yebo, izinwele zekhanda ezikhanyayo zesikole. Ngezinwele ezimfushane kunzima kakhulu ukukhetha inketho engcono kakhulu kunama-curls amade. Kubalulekile ukucabangela ukuthi ingane ayihlali endaweni eyodwa, ihamba njalo, okuvame ukuholela eqinisweni lokuthi izinwele azibuki kahle futhi zihlanjululwe kahle.
Hlala nezinhlobonhlobo zabo eziningi zezinwele zezithombe esikoleni. Ngezinwele ezimfushane, ungenza lokhu okukhethwa kukho okufashisayo futhi okulula:
Izinwele ezihlanzekile nezinomile zihlukaniswa ngokuhlukanisa ngokuqondile.
Ehlangothini ngalunye lwezinwele esiwahlukanisa sibe ngamacu amabili afanayo, sithola izingxenye ezingu-4.
I-strand eyodwa kusuka ohlangothini olunye isontekile ku-knot ngendlela ewashi.
Ukulungisa i-hairpin encane engabonakali noma encane kuyofanelana.
Ngezinye izingxenye senza izinyathelo ezifanayo.
Ungaphazamisa amathrekhi angaphezu kwamane, ukuze izinwele zibe ngcono ukubamba. Ngaphezu kwalokho, izinwele zibukeka kahle ngokufaka i-spikelet kusuka ku-strand ngayinye.
Ngosizo lwezingxenye ezincane ze-raber monophonic, ungenza i-hairdress yokuqala kanye nenhle ngezinwele ezimfushane nsuku zonke. Ungenza i-bezel ewusizo esikoleni, okuzohlala usuku lonke.
Inqubo yokwakha umgqomo ihlanganisa okulandelayo:
Ukuhlukaniswa kwezinwele ne-oblique yokuhlukanisa.
Ukuqoqa ukukhiya kokuqala eduze nendawo yokukhula kwezinwele kumsila ojwayelekile.
Bese uxhuma umsila wokuqala ngolunye uhlangothi, ulingise umsila eceleni komphetho.
Ukuqinisa i-ponytail ngayinye nge-band elastic.
Ungenza i-bezel efanayo ekhanda noma ushiye izinwele ezivulekile ngemuva kwekhanda.
Ikhanda elingavamile nelisebenzayo esikoleni ngezinwele ezimfushane ngokuqinisekile liyojabulisa umfundi osemusha.
Ukugqoka i-hairstyle ekahle esikoleni ngezinwele ezimfushane. Izithombe zezingane ezinezinhlobonhlobo zama-braids zifakazela ubuhle nokuvinjelwa kwekhanda. Uma ingane ine-bang, khona-ke ingakwazi ukuguqulwa ibe yi-braid. Ikhanda lezinwele libukeka elingajwayelekile, futhi kuthatha isikhathi esincane ukuyidala. Ngakho-ke, kuyadingeka:
Hlanganisa kahle izinwele ezihlanzekile.
Hlukanisa izinwele ngezinhlanga ezimbili ezinhlangothini zombili.
Ingxenye yezinwele phakathi nendawo kufanele ibhalwe ku-spikelet, kufaka phakathi ama-bangs.
Izinkambo zengxube zinganciphisa kancane kancane, noma kungenzeka ukuqoqa emsila kanye ne-scythe.
Ukuze umhlobiso, umnsalo omncane ufanelekile. Lolu khetho luhlangene kahle ne "dick ballerina", ezinye izinhlobo zokugaya, kanye nezesekeli: amatheyipu, ama-rims, ama-crabs.
Amabhande amabili - mhlawumbe i-hairstyle ethandwa kakhulu kubafundi besikole. Kodwa kunzima ukubopha amabhande afanele ngezinwele ezimfushane, ngakho-ke kukhona ukuhumusha kwazo zonke izinwele zezinwele eziziwa:
Isibonelo, ungakwazi ukubopha ama-braids amabili cishe ebunzini bese uwagoqa nxazonke zawo, evikelekile ngombonakaliso ongabonakali noma ongenwele.
Ungenza ama-pigtails amabili futhi ulungise amathiphu esisekelo sabo ngosizo lokungaqondakali, futhi zonke izinwele zihlangane zibe ponytail.
Kunezici ezimbili eziyinhloko zezinwele zezinkolo zesikole. Okokuqala - isitayela sezinwele kufanele sibe usizo futhi esikahle. Okwesibili - izinwele akufanele ziphazamise ingane esikoleni.
Ngokuvamile imizuzu embalwa ngezinwele ezimfushane ungakha i-hairstyles enhle yansuku zonke ye-fashionista encane. Nazi izinketho ezimbalwa.
Endleleni yokudalwa uzodinga inqwaba, ama-bands e-elastic 4, angabonakali noma ama-studs:
Hlanganisa kahle izinwele ezihlanzekile bese uwahlukanisa zibe izingxenye ezine, okungukuthi, ama-halves amabili ohlangothini ngalunye;
Isiyunithi sokuqala ngakwesinye icala siphenduke sibe yi-tourniquet futhi sihlanganisa isisekelo sezinwele, sakha "i-bump";
Izenzo ezifanayo zenziwa nezinye izintambo ezintathu.
Ukuze silungise sisebenzisa ama-band elastic and non-visiblepin (izinwele zesikhumba).
Kwanele ukuba nekhesi kanye nebhanti elisezingeni eliseduze lokwenza izinwele ezimnandi nokusheshisa ezinganeni esikoleni:
Siqoqa izinwele emsila ukusuka ngezansi, okungezansi kwengxenye ye-occipital;
Lungisa umsila nge-band elastic;
Senza umgodi omncane phakathi phakathi kwe-band elastic;
Gweba izinwele emsila ungene emgodini ukusuka phezulu phezulu;
Umsila uphumile kumbuzo olungele.
Ungakhetha kanjani i-hairstyle esikoleni ngezinwele ezimfushane?
Lapho ukhetha i-hairstyle yesikole, udinga ukukhumbula ngobuhle nokusebenza: ungacabangi nje kuphela ukuthi ungahlukanisa kanjani ingane esixukwini.
Abekho abantu ababili abafana. Ungenza ikhanda le-classic eyaziwayo ngaphandle kokugqamile futhi ingane izobukeka ngendlela yayo ekhangayo.
Uma ukhetha i-hairstyle kumfundi wesikole, umuntu kufanele acabange ukuthi izinwele akufanele ziwa ngobuso, ziphazamise ingane. Kubalulekile ukukhetha inketho ezohlala usuku lonke.
Ngaphezu kwalokho, kunezici ezithile okudingeka wazi ngazo lapho ukhetha i-hairstyle.
Ukuvela kwengane kaningi akuhlanganiswa ne-hairdo. Kungaba ukukhula noma ubude bentombazane, isimo sombuso noma ubude bentamo. Intombazane enobuso obunzima ngeke ithole izinwele, lapho izinwele zizokwenza khona ubuso, ziqokomise ukuzungeza. Intombazane egcwele akufanele ikwenze izinwele ezinhle kakhulu, okuwukuphela kwesisindo sokubukeka ukubonakala kwengane.
Ukuzijabulisa kuyisici esibalulekile lapho ukhetha i-hairstyle. Ngokulungiswa okungalungile, umsila uzothuthuka, okuzophazamisa ingane ngesikhathi senqubo yokuqeqesha. Uma izinwele zezinwele zifakwa ngokungalungile, zizochoboza, zinikeze intombazane enhle.
Isilinganiso kufanele sibe khona kukho konke, kuyinkinga kanye nezesekeli zezinwele. Ungakhethi imihlobiso ekhanyayo neyinkimbinkimbi, ngeke ihambisane nemvelo yesikole.
Qaphela ukulungiswa kwezinwele okuhle. Lapho usukhulile, umama wesikole angalungisa izinwele zakhe, ongakwazi ukusho ngabafundi besikole samabanga aphansi. Ukulungiswa okuhle kuqinisekisa ukubonakala kahle kwesikoleni esikoleni ngosuku lonke lwesikole.
Ubuhle, ukulula kanye nokusebenza kwezinwele ezidalwe esikoleni zihlale zingaphezu komncintiswano. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukugcizelela ukuhambisana kwalezi zinwele ze-classic njengezimpukane nemisila ngezincazelo ezihlukahlukene.
Izinwele emibalabala - ukuhlolwa ezithakazelisayo
Kwekhanda nge tiara - ikhambi elikhulu nganoma yisiphi umakoti
Indlela ukususa upende izinwele ekhaya?
Trend kwesizini - nge amabhande asekhanda imbali
Flag Iran njengesifanekiselo kazwelonke
Levomitsitinovye lehla ekhaleni Umhlahlandlela kanye nokubuyekeza
Ezidunjini ezomisiwe: izinkomba ukusetshenziswa futhi izakhiwo zomuthi isimangaliso
Iwayini kusukela plums ekhaya
Mkhuba Atmosphere "ice inaliti". Incazelo izimbangela
Amehlo Kungani silume? Incazelo yezizathu
Itshe talc nge izakhiwo esiyingqayizivele
The izinto ezikhanya ka Dalian
Kanjani ukufeza ukususwa izinhlelo kusukela kukhompyutha
Ikhaya kusuka ibha nge Loft: iyini ngokunenzuzo ukwakhiwa okunjalo?